निर्जीवन बीमाको लिडर शिखर इन्स्योरेन्स कस्तो छ ? हेरौ कम्पनी विस्लेषण ! – Insurance Khabar
निर्जीवन बीमाको लिडर शिखर इन्स्योरेन्स कस्तो छ ? हेरौ कम्पनी विस्लेषण !
प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७५, आईतवार ११:२२
प्रधान कार्यालय : थापाथली,काठमान्डौ
सेयर रजिष्ट्रार एन आई बी एल एस क्यापिटल
शिखर इन्स्योरेन्स निर्जीवन बीमा कम्पनीको लिडर कम्पनी हो ।
कम्पनीका अधिकांश सूचांकहरु औसत निर्जीवन बीमा कम्पनीको सूचक भन्दा माथि छ ।
बीमा शुल्क आर्जनमा कम्पनी सबै भन्दा अघि छ भने खुद नाफा सबै भन्दा धेरै कमाउनेमा पनि शिखर नै अघि छ ।
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष ७५/७६को पहिलो त्रैमासको वित्तिय विवरण
शिखर इन्स्योरेन्सले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७४/७५ बीच तुलना गर्दा :
कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा खुद मुनाफा १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । कम्पनीले गत वर्ष यही त्रैमासमा ९ करोड ५५ लाख रुपैया खुद नाफा गरेको थियो । खुद नाफा गत त्रैमास भन्दा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
इन्स्योरेन्सको जगेडा कोषको आकार ६ प्रतिशतले कम भएर २९ करोड ५६ लाख पुगेको छ ।
कम्पनीको बीमा कोष ३२ प्रतिशतले वृद्धि गरेर ९० करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमास सम्म ८७ करोड ७० लाख कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कुल बीमा शुल्क आर्जन रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमास भन्दा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
कम्पनीको खुद बिमा शुल्क आम्दानी गत त्रैमास भन्दा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४५ करोड ८० लाख पुगेको छ ।
यस त्रैमास सम्ममा कुल दावी भुक्त्तानी रकम ४० प्रतिशतले वृद्धि भएर ३६ करोड ८ लाख रहेको छ भने खुद दावी भुक्त्तानी २४ करोड ८६ लाख रहेको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा ७२ प्रतिशतले धेरै हो भने ८२ करोड ६० लाख दावी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी १४ प्रतिशतले कम हुँदै ३९ रुपैयाँ ९९ पैसा रुपैया पुगेको छ । प्रति शेयर आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ४६ रुपैयाँ ७४ पैसा थियो ।
कम्पनीको प्रथम त्रैमासमा प्रतिशेयर नेटवर्थ २ सय १८ दशमलव ४६ रुपैयाँ, प्रति शेयर कुल सम्पत्तीको मुल्य ४ सय ०६ रुपैयाँ रहेको छ ।
कम्पनीले बीमा समितिले तोकेको १ अर्ब पुँजीको लक्ष्य हासिल गरिसकेको अवस्था छ । कम्पनीले आफ्नो पुँजी २९ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा कम्पनीको खुद नाफा ११ प्रतिशतले वृद्धि भयो जसको कारणले प्रति शेयर आम्दानी १४ प्रतिशतले घट्न पुग्यो ।
त्यस्तै कम्पनीको जगेडा कोषको आकार पनि घटेको छ ।
कम्पनीले बीशुल्क आर्जन रकममा १७ प्रतिशतको वृद्धि गर्न सफल भएको छ ।
बीमा लेख संख्यामा भने सामान्य ४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।
यसको मतलव कम्पनीले आफ्नो व्यापार व्यवसाय वृद्धि गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।
शिखर इन्स्योरेन्सको विगत ५ वर्षको प्रमुख वित्तिय विवरण :
अरु निर्जीवन बीमा इन्स्योरेन्स कम्पनी संग नेपाल इन्स्योरेन्सको तुलनात्मक अध्ययन ( पहिलो त्रैमासको आधारमा)
चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको आधारमा:
बीमा कोषको आधारमा :
कुल र खुद बीमा शुल्क को आधारमा :
खुद नाफा र प्रति शेयर आम्दानीको आधारमा :
कम्पनीको विगत ५ वर्षको लाभास :
नेप्सेमा २०७५/१०/२४ गते कारोवार भएको ग्राफ:
उच्च : ९०६ न्यून : ८९० बन्द : ८९०
कारोवार परिमाण : २२४०
(२०७५/१०/२४ गतेको कारोवार अनुसार